Yusuf Garaad: June 2014
Adigu Ka Tali
Fadlan ha iga raalli ahaadeen akhyaarta tirada badan ee barteyda akhriya, waxaan doonayaa in aan ka afeefto wiilasha dhoohan ee aan iyaga oo aan talo hayn, waxna akhrin aflagaaddadu sidii matag u soo dhaafto.
Waxaa iga afeef ah in aanan barteyda u dooneyn aflagaaddo iyo hadallo qadaf ah qofkey doonaan ama dhinaca ay doonaan ha ku saabsanaadeene.
Fadlan haddii calooshaada cuqdadi barkatay ama aadan aqoon si asluub leh in aad fikir aan xanaf lahayn u gudbiso, barteyda ha la soo doonan.
Inta fikir haysa ee dooneysa in ismari waaga laga gudbo, fadlan taladaada ila wadaag.
Posted by Yusuf Garaad at 19:40:00
Duqa London, Boris Johnsosn iyo Michael Bloomberg - SQ Alex Lentati
Marka aan aan labada magaalo u kala safro, waxaan is dhihi jiray maxaa Muqdisho u diiday in Internetkeedu uu u dhakhsiya bato sida kan Nairobi.
Maalmo dhoweyd oo aan London joogay waxaan is lahaa maxaa Nairobi u diiday in internetkeedu uu ahaado sida kan London?
Laakiin toddobaadkii hore waxaan wargeysyada London ka akhriyay Duqii hore ee magaalada New York, Michael Bloomberg, oo London uga digaya in dhaqaalaheeda iyo shaqooyinkeedaba uu wiiqi doono haddii internetkeeda ay ka dhigi weydo kuwa adduunka ugu dhakhsiyaha badan.
Wuxuu London ku dhaliilay in dhismayaal badan oo magaalada hoose ku yaallaa aanay haysan internet dheereeya.
Internet dheereeyaa wuxuu maanta muhiim u yahay, ayuu yiri Bloomberg, sida biyaha iyo korontada.
Waxaan is weydiiyay, annagu haddaan Soomaali nahay, xaggeen uga jirnaa tartanka adduunka ee internetka, ganacsiga iyo shaqooyinka?
waa mid aan hooy lagaa oran
Waxaan maanta aad ugu faraxsan ahay in aan ku soo laabtay dalkeyga hooyo gaar ahaan caasimadda. Hawadiisa, ciiddiisa, qorraxdiisa, xoolihiisa, beerihiisa, ugaartiisa, badda iyo webiyadiisuba waa hantideyda aan la wadaago Soomaali oo dhan. Wax ka mid yahay waxyaabaha na mideeya oo ay ku jiraan afkeenna macaan, diinteenna suubban iyo dhaqanka oo wanaag u badan toosinna u baahan. Waxaan u mahadcelinayaa Ra’isal Wasaare Cabdiweli oo dayaarddiisa khaaska ah aan ka soo raacay Nairobi.
Weyba geeki eed ingki farahsina ini ani ha ki nagathi dhulki aadey gaar hang beledli ingki wing. Neeftis, araathis , iriithis, heelah, beeroshey i ugaartis i badooshey i webiyaalshey weybuwa wala isli leni Soomaali dhong. Weyba ku mid eta wala uni nimidooy afkaani mayow, diintaana suubung i dhaqankaane fayli toosiyow ing baahing.
Weyba ing mahadnagey Ra’isal Wasaare Cabdiweli o dayuuridis goonigi eh haku rahi Nairobi.